Huawei ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း specification အချို့နဲ့ release date ထွက်ရှိလာပြီ – AsiaApps
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ အစောပိုင်းလောက်က Infinity Flex display နဲ့ Samsung ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း အမျိုးအစားကို Samsung Developer Conference 2018 မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်သလို အခုဆိုရင် Huawei ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသိရှိရပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Huawei ရဲ့ foldable စမတ်ဖုန်းဟာ ဖြန့်ထားတဲ့အချိန်မှာ ၇ လက်မကျော်လောက်ပဲရှိနေမယ်လို့ အရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ rumors တွေကဆိုခဲ့ပေမယ့် အခုထွက်ရှိလာတဲ့ detail မှာတော့ ၈ လက်မအထိရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပုံမှန်ခေါက်ထားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ display ဟာ ၅ လက်မရှိနေမှာပါ။ ဖုန်းအတွက်ကွေးနိုင်တဲ့ display panel ကိုတော့ Mate 20 Pro အတွက် curved OLED display panel ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ BOE technology ကပဲပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Huawei အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီးက
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ တိကျတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ Specification နဲ့ အသုံးပြုထားမှု pattern အပါအဝင်အခြားသောအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြသွားဉီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းဟာသင်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ကိုပိုပြီး ပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်။”
သူတို့မဖော်ပြသေးချင်ပေမယ့် detail တော်တော်များများက leak ဖြစ်နေပြီးပါပြီ ?) ဒါ့အပြင် Huawei ဟာသူ့ရဲ့ foldable စမတ်ဖုန်းကို ကိုရီးယား SIM carriers တွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Huawei ရဲ့ပထမဉီးဆုံး foldable စမတ်ဖုန်းဟာ ကိုရီးယားမှာ ပထမဉီးဆုံးထွက်ရှိလာမယ့် အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Huawei ဟာသူ့ရဲ့ foldable စမတ်ဖုန်းကို 5G capable device အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ချထားတာကြောင့် ၂၀၁၉ မှာ 5G network ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရီးယားကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုတော့ လာမယ့် MWC expo 2019 အကျော် မတ်လ လောက်မှာစတင်မိတ်ဆက်ကြေညာပြီး ဧပြီနဲ့ ဇွန်လ လောက်မှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Samsung ရဲ့ foldable စမတ်ဖုန်း Mass production ကလည်း လာမယ့် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် CES အပြီး လအနည်းအငယ်ဖြစ်နေတာမို့ ကြည့်ကောင်းတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်လာတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ခေါက်ထားတဲ့အချိန် 4.6 လက်မရှိနေပြီး ဖြန့်ထားတဲ့အချိန် 7.3 လက်မအထိရှိနေတဲ့ Infinity Flex display နဲ့ Samsung လား? ခေါက်ထားတဲ့အချိန် ၅ လက်မ ရှိနေပြီး ဖြန့်ထားတဲ့အချိန် ၈ လက်မအထိရှိနေမယ့် BOE technology display နဲ့ Huawei လား? ကြိုက်နှစ်သက်ရာလေးကို ကွန်းမန့်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Messenger မှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဗီဒီယိုအတူတူကြည့်နိုင်မယ့် feature ကို စမ်းသပ်နေတဲ့ Facebook